US yekufamba masiki mvumo yekuwedzerwa kusvika pakati paNdira 2022
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » USA Kuputsa Nhau » US yekufamba masiki mvumo yekuwedzerwa kusvika pakati paNdira 2022
Airlines • nhandare yendege • avhiyesheni • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Hurumende Nhau • Hawaii Kupwanya Nhau • Health News • Hospitality Industry • Hotera & Resorts • nhau • vanhu • Rail Kufamba • Kuvakazve • Kutarisirwa • chengetedzo • ushanyi • kutakura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Trending Now • USA Kuputsa Nhau • Akasiyana Nhau
US mask mandate inoda kumeso kumeso kuti zvipfekwe nevose vanofamba mundege, ngarava, zvitima, nzira dzepasi pevhu, mabhazi, matekisi uye kukwira-masheya uye kunzvimbo dzekutakura dzakadai nendege, zviteshi zvebhazi kana feri, zviteshi zvechitima nechitima, uye zviteshi zvengarava.
Hurumende yeUS kuwedzera masimba ekufambisa yeruzhinji.
Vafambi vekuUS vanofanirwa kupfeka masiki mundiza, zvitima, mabhazi.
Ikozvino TSA yekufambisa mask mandate inopera munaGunyana 14, 2021.
Sekureva kweshumo razvino, Hurumende yeUS iri kuronga kuwedzera chirevo chekutakura veruzhinji vafambi mundege, zvitima nemabhazi uye kumahofisi enhandare nezviteshi zvezvitima kusvika muna Ndira 18, 2022.
Ikozvino TSA yekufambisa mask mandate inomhanya kusvika munaGunyana 13, 2021 uye inoda kushandiswa kwemeso masiki pane angangoita ese mafambiro ekufambisa.
Zvinoda kumeso kumeso kuti zvipfekwe nevose vanofamba mundege, ngarava, zvitima, nzira dzepasi pevhu, mabhazi, matekisi uye makosi-ekugovana uye kunzvimbo dzekufambisa dzakadai senhandare dzendege, zviteshi zvebhazi kana feri, zviteshi zvechitima nechitima, uye zviteshi zvengarava.
Vese vakuru veAmerican vatakuri vemhepo vakaudzwa nezvekuwedzeredzwa kwakarongwa parunhare neiyo Zvekufambisa Chengetedzo Kutungamira (TSA) uye Centers for Disease Control and Prevention (CDC) nhasi, uye nhare yakaparadzana nemasangano emuchadenga arongerwa Chitatu, vezvemabhizimusi vanoti.
US yekufambisa yeruzhinji mask mandate ndiyo yakakonzera matambudziko mazhinji, kunyanya vari mukati memhepo, uko vamwe vafambi vakaramba kupfeka mamask. Federal Aviation Administration yataura nhasi kuti yagamuchira mishumo kubva kunhandare dzendege dze2,867 varikuramba kupfeka chifukidzo kubva muna Ndira 1, 2021.
CDC muna Chikumi yakaita tweak diki kumitemo yayo, ichiti hazvichadi kuti vafambi vapfeke masiki munzvimbo dzekunze dzekufambisa uye nenzvimbo dzekunze pamaferi nemabhazi.
Sekureva kwevakuru veCDC, masimba ekufambisa masiki ave achishanda kugadzirisa ingongoing COVID-19 njodzi.
Queen Elizabeth anoti:
Gunyana 20, 2021 pa 16: 29
Vanhu vakawanda vanofa kubva kune chero cheizvi: kusvuta, doro, kubvisa pamuviri. Asi hurumende haidi kurambidza, kudzikamisa, kudzivirira chero cheizvi asi panzvimbo pezvo pinda mumabhizinesi emhondi aya kuburikidza nekutora mutero.